Tantaran'ny orinasa-KOSMOS Home Textile Co., Ltd.
Ny toeranao ankehitriny: Home>Momba anay>Company Profile
TEOSITRA AN-TRANO KOSMOS
KOSMOS Home Textile Niorina tamin'ny 2002, dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lamba fandriana. Ny orinasanay dia any Nantong, faritanin'i Jiangsu, izay manamorona ny anarana hoe "City of Home Textile". Izahay dia manana fehezan-teny R&D vaovao, rafitra fandidiana tsena mahaleo tena ary toha-pamokarana feno hanomezana lamba lamba modely. Ny famokarana ataonay dia manana laza malaza eo an-toerana sy any ivelany.
KOSMOS dia mametraka ny fo manontolo hanatsara ny kalitaon'ny fiainam-pianakaviana ary mijoro eo alohan'ny lamaody mandrakariva mba hananganana tontolo milamina sy voadio. Miaraka amin'ireo toetrany manokana, endrika avo lenta sy novolavolaina, dia nanaraka ny dingana amin'ny fiainana maoderina.
Ny tanjon'ny KOSMOS dia ny hanome anjara biriky hanatsara ny fari-piainana ary koa ny fivoarany manokana.
Orinasa ： KOSMOS Home Textile
Niorina ： 2006 Taona
Karazan'orinasa ： Orinasa mpamokatra sy varotra
Mpiasa ： ambany 100
Tsena lehibe: Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Azia atsinanana, Moyen Orient
Seranan-tsambo akaiky indrindra ho an'ny fanondranana vokatra ： Shanghai, Nantong
Andiam-pitaterana eo ambanin'ny fomba varotra ： FOB, CFR, CIF
Fomba fandoavam-bola azo ekena ： T / T, L / C
Fiovan'ny orinasa: USD 3 - 5 tapitrisa isan-taona
Serivisy voalohany: Famokarana sy fanodinana lamba
Adiresy ： Qi'An Industrial, Distrikan'i Tongzhou, tanàna Nantong, Sina
Volana fanondranana ： USD 3 - 5 tapitrisa isan-taona
Isan'ny mpiasa ao amin'ny departemantan'ny varotra any ivelany ： 6 ~ `10
Isan'ny mpikaroka ： 5 ~ 10
Isan'ny mpanara-maso kalitao ： 5 ~ 10
Isan'ny mpiasa rehetra: Eo ambanin'ny 100
Noho ny famolavolana malaza sy kalitao avo lenta, ny Jintian Textile (Nantong) Co., Ltd dia nanitatra ny asany hatrany amin'ny tsena ampitan-dranomasina sy eo an-toerana. Avy amin'ny tovona pui- mamaritra ny fitaona ho avy mialohan'ny aôrisitry ny endriky ny atao, ny fototeny böt; ny tovana -of izay mamaritra ny mpanao (mpanao fahatelo amin'ny bika ambehivavy); ary ny tovana -s mamaritra ny ploraly
Firenena sy faritra dimam-polo
Firenena mivarotra mafana
Birao mihoatra ny 30